XOG:- Qorshe xilka looga qaadayo Rooble oo ka socda Muqdisho iyo Mursal iyo Farmaajo oo Shirqool cusub maleegay - Ceeldheer News: Somalia News Update
XOG:- Qorshe xilka looga qaadayo Rooble oo ka socda Muqdisho iyo Mursal iyo Farmaajo oo Shirqool cusub maleegay
Ilo xog ogaal ah oo ku dhow guddoonka baarlamanaanka ayaa xaqiijiyay in kulanka deg degga ah ee uu Guddoomiyaha golaha shacabku iskugu yeeray xildhibaannada maalinta Sabtida ah la qorsheynayo in xilka looga qaado Ra’iisul xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Guuxa arrintan ku saabsan ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u soo baxayay, kaddib markii xog laga helay Xildhibaanada qaar ay isla wadaageen in maalinta Sabtida ay la gedin doonaan Rooble, si mowjad cusub uu dalku u galo.
Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka fedraalka Soomaaliya ee Waqtigoodu dhammaaday ayaa Rooble ku eedeyn doona in uu ku fashilmay diyaarinta doorasho qof iyo cod ah, tan oo la mid ah eeddii xilka looga tuuray Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Khayre.
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa Xalay saqdii dhexe la hadlay Warbaahinta,islamarkaana sheegay in uu soo dhaweynayo go’aanadii ka soo baxay Galmudug iyo Hirshabeelle iyo baqyadii Nabadeed.
Waxaa kale oo uu cadeeyay in dib loogu laaban doono wada-hadalada iyo heshiiskii 17-September,islamarkaana Maalinta Sabtida ah uu hor tegayo xildhibaanada golaha shacabka si uu warbixin u siiyo,islamarkaana ay dib uga laabtaan go’aankoodii hore ee doorashada.
CC.Shakuur oo RW Rooble uga digay in loo shirqoolo sidii Kheyre iyo 6-Tallaabo oo la soo jeediyay
Maamul gobaleedkii ugu horeeyay oo shuruud cusub ku xiray dib ugu soo laabashada Wada-hadalka doorashooyinka
Madaxweynaha Somaliland oo si kulul uga hadlay xiisadda ka taagan Magaalada Muqdisho
IGAD oo war xasaasi ah ka soo saartay xaaladda Soomaaliya